औषधि लिमिटेडका महाप्रबन्धकलाई प्रश्न: ‘सिटामोल’को अभाव हुन नदिन के गर्दै हुनुहुन्छ? [अन्तर्वार्ता] :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
औषधि लिमिटेडका महाप्रबन्धकलाई प्रश्न: ‘सिटामोल’को अभाव हुन नदिन के गर्दै हुनुहुन्छ? [अन्तर्वार्ता] लिमिटेडमा सिटामोलसहित अन्य कुन–कुन औषधि उत्पादन हुन्छ?
कमला गुरुङ शुक्रबार, जेठ २८, २०७८, ०६:३२:००
काठमाडौं- कोभिड १९ को महामारीपछि नेपाल सहित विभिन्न देशमा पारासिटामोलको माग अत्यधिक बढेको छ। टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने लगायतमा प्रयोग गरिने पारासिटामोल अहिले बजारमा सहजै पाउन छाडेको छ।
स्वदेशी उत्पादक, व्यवसायी र औषधि व्यवस्था विभागले बजारमा पारासिटामोलको अभाव नरहेको बताउँछ। तर सहजै पाउने अवस्था भने नरहेकोमा उनीहरुको दुई मत पनि छैन।
नेपालमा पारासिटामोल उत्पादनका लागि २६ वटा उद्योग दर्ता भएका छन्। तीमध्ये १६ वटा उद्योगले मात्र हाल पारासिटामोल उत्पादन गर्दै आएका छन्। जसमध्ये सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेड पनि एक हो। औषधि लिमिटेडको उत्पाद सिटामोल हो। सिटामोलको नाम चर्चित भएकै कारण बजारमा उपलब्ध हुने अन्य ब्रान्डका पारासिटामोललाई नै सिटामोलकै नाममा मानिसहरुले चिन्ने गरेका छन्। अर्थात पारासिटामोलको पर्यायबाची शब्द जस्तै भएको छ लिमिटेडको उत्पादन सिटामोल।
नेपाल औषधि लिमिटेडले विगत दुई वर्षदेखि सिटामोलको पुनः उत्पादन गर्दै आएको छ। विसं २०२१ सालमा स्थापित यस लिमिटेड बीचमा आठ वर्ष बन्द समेत भएको थियो। यस लिमिटेडले मासिक करिब ४० हजार ट्याब्लेट सिटामोल उत्पादन गर्दै आएको छ।
यो आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म २ करोड ट्याब्लेट सिटामोल उत्पादन गर्ने लिमिटेडको योजना हो। जसमध्ये ६७ लाख ५० हजार ट्याब्लेट बनाउन बाँकी छ भने अन्य बजारमा गइसकेको छ। हाल आफूहरुसँग हाल ८ लाख ८० हजार ट्याब्लेट सिटामोल मौज्दातमा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडका महाप्रबन्धक मोहम्मद सफिउल्लाहले बताए।
उनका अनुसार बिहीबारदेखि मौज्दातमा भएका कच्चा पदार्थ पनि सकिएको छ। सिटामोल बनाउन चाहिने कच्चा पदार्थ ल्याउनका लागि प्रक्रिया सुरु भएको उनले बताए।
बजारमा हाल पारासिटामोलको अभाव नभएपनि पाउन कठीन रहेको उनले बताए। आफूहरुले बजारमो माग अनुसार नै हाल सिटामोलको उत्पादन गरिरहेको उनी बताउँछन्।
हाल नेपाल औषधि लिमिटेडले दैनिक कति सिटामोल उत्पादन गर्छ? माग र खपत कति हुन्छ? अभाव हुन नदिन लिमिटेडको भूमिका के लगायत विषयमा हामीले कुराकानी गरेका छौँ। महाप्रबन्धक सफिउल्लाहसँग गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः
– बजारमा अहिले पारासिटामोल सहजै पाउन छाडेको छ। औषधि व्यवसायी तथा उत्पादकहरुले पारासिटामोलको अभाव नभई पाउन केही मुश्किल मात्र भएको बताउने गरेका छन्। अहिलेको अवस्था नियाल्दा अभाव या पाउन मुश्किल के हो?
बजारमा अहिले पारासिटामोलको अभाव भएको भन्ने विभिन्न खबर सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन्। तर हामीले हेर्दा अभाव भएको भन्दा पनि अलि कमी भएको देखिन्छ। बजारको माग अनुसार पूर्ति हुन नसकेको कुरा पनि हो। तर बजारमा कमी नै भइसक्ने अवस्था छैन। २/३ वटा फार्मेसी पसलमा जाँदा चाँही पाउने अवस्था छ।
अभाव भन्दा पनि पारासिटामोलको माग बढेको छ। यसका पनि विभिन्न कारणहरु हुन सक्छन्। पारासिटामोल पाइएन, अभाव भयो भन्ने खबर आउने बित्तिकै धेरैले घरमा औषधि सञ्चित पनि गर्ने गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै अहिले पारासिटामोलको कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको छ। यसले गर्दा पनि कमी भएको हो की भन्ने लाग्छ। माग अनुसारको पूर्ति हुन नसकेको हो तर अभाव भएको होइन।
– नेपाल औषधि लिमिटेडले उत्पादन गर्ने सिटामोल पहिले कति खपत हुन्थ्यो र अहिले कति हुने गरेको छ?
नेपालमा सामान्यतया वर्षेनी ५ देखि ८ करोड ट्याब्लेट पारासिटामोलको आवश्यकता पर्छ। धेरै वर्षसम्म बन्द भएको नेपाल औषधि लिमिटेडले पारासिटामोलको उत्पादन सुरु गरेपनि बनाउने क्षमता धेरै छैन। एउटा मात्र मेसिन छ। पहिले बजारमा माग पनि धेरै थिएन। यहाँ माग्न आए दिने तर आफैंले बजारमा लैजाने स्थिति भने थिएन। तर अहिले हामीले आफ्ना रणनीतिहरु परिवर्तन गरेका छौँ।
अहिले हामीले सिधै प्रदेश सरकारलाई औषधि पठाउन सुरु गरेका छौँ। सिटामोल बनाउने हाम्रो क्षमता भनेको तीन दिनमा एक व्याच अर्थात् ३ लाख २० हजार ट्याब्लेट हुन्थ्यो। अहिले तीन दिनमा दुई ब्याच अर्थात् ६ लाख २० हजार ट्याब्लेट उत्पादन गर्छौं। यो हिसाबले एक महिनामा करिब ४० लाख ट्याब्लेट सिटामोल उत्पादन हुन्छ।
माग र आवश्यकता अनुसार उत्पादन बढाउन पनि सकिन्छ। विराटनगरमा अहिले सिटामोलको अभाव थियो। हामीले अर्डर भएर अनुसार २० लाख ट्याब्लेट पठाइसकेका छांै। केही बाँकी छ।
– अहिले बजारमा सिटामोलको माग अत्यधिक बढेर गयो। बजारको माग अनुसार सिटामोलको उत्पादन गर्न सक्नु भएको छ त?
अहिले जति माग छ, त्यसलाई थोरै कटौती गरेका छौँ। किनभने हामीसँग जति कच्चा पदार्थ मौज्दात थियो, त्यही अनुसार उत्पादन गर्‍यौँ। सिटामोलको अर्को कच्चा पदार्थ नआउँदासम्म व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं नजिक भएकालाई अलि थोरै कम गर्ने र अलि टाढा भएकालाई सिटामोल दिने गरेका छौँ। जस्तो हुम्ला र जुम्ला जस्ता जिल्लामा सिटामोल पठायौँ। सिन्धुली, जनकपुर, पोखरा पनि पठाएका छौँ।
– त्यसो भए अहिले अभावको कुरा आइरहँदा नेपाल औषधि लिमिटेडले सिटामोलको उत्पादनलाई एकै पटक बढाउनु भन्दा पनि माग जुन ठाउँबाट आउँछ, उनीहरुको लागि मात्र तपाईंहरुले उत्पादन गरिरहनु भएको हो?
अहिले सिटामोल बनाउने हामीसँग एउटा मात्र मेसिन छ। तुरुन्त मेसिनको क्षमता बढाउन सक्ने स्थिति छैन। हामीले सिफ्टहरु मात्र परिवर्तन गर्ने हो। यो असार मसान्तसम्म २ करोड ट्याब्लेट उत्पादन गर्ने हाम्रो योजना थियो। जसमध्ये धेरैजसो बजारमा गइसकेको छ। हामीसँग ६७ लाख ५० हजार बाँकी छ।
– अहिले सिटामोल उत्पादन गर्ने मेसिन यहाँहरुसँग एउटा मात्र छ। यसले गर्दा पनि माग अनुसार सिटामोल उत्पादन गर्न नसिकएको यहाँको भनाई छ। माग अनुसारको सिटामोल उत्पादन गर्न कति वटा मेसिनको आवश्यकता हो?
सिटामोल उत्पादनका लागि एउटा मेसिन भएपनि काफी हुन्थ्यो। तर उत्पादन गर्ने क्षमता चाँही मेसिनको कम भयो। यो भन्दा धेरै पावरफुल र उत्पादन क्षमता भएको मेसिन भए हामीलाई एउटाले पुग्छ। नयाँ प्रविधिको मात्र आवश्यकता हो। यो प्रक्रियामा पनि हामी गइसकेका छौँ। कुनै मेसिन हामी आफैँले खरिद गरेर हुन्छ या कुनै दातासँग मागेर हुन्छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ।
– बजारमा सिटामोलको अभाव हुन नदिन यहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ, नेपाल औषधि लिमिटेडले कस्तो खालको भूमिका खेल्छ?
सर्वप्रथम त म सबैलाई आग्रह गर्छु, अनावश्यक रुपमा औषधि किनेर नराख्नुहोस्। औषधि हो खानेकुरा होइन। चिकित्सकको परामर्श अनुसार आवश्यक भए मात्र किन्नुहोस्।
हामीले जुन २ करोड सिटामोल उत्पादन गर्ने भनेका थियौ त्यो अनुसार १० टन कच्चा पदार्थको आवश्यक थियो। त्यसमध्ये साढे ६ टन प्रक्रियामा गइसकेको छ। एक हप्तामा थप कच्चा पदार्थ पनि आउँदैछ। बाँकी एक महिनाभित्र आउने भएकाले सिटामोलको अभाव भोलिका दिनमा हुने जस्तो देखिँदैन।
यो बाहेक अन्य विकल्प भनेको बंगलादेशबाट सिटामोलको रेडिमेड ट्याब्लेट बनाएर ल्याउन पनि सकिन्छ। हामीले सिधै हाम्रो प्याकिङ पठाइदिन्छौ र हाम्रो नै नाममा रेडिमेट भएर औषधि आउन सक्छ। तर सरकारले यसका लागि सहजीकरण गर्‍यो भने मात्र संभव छ।
– नेपाल औषधि लिमिटेडसँग कति समयलाई पुग्ने सिटामोल र कच्चा पदार्थ मौज्दातमा छ?
अहिलेसम्म हामीले दिएका थियौं। हामीसँग करिब १२ लाख ट्याब्लेट सिटामोल छ। जसमध्ये ३ लाख २० हजार पोखराका लागि पठाएका छौँ। बाँकी औषधि नागरिकलाई दिन्छौ। आउँदो हप्ता कच्चा पदार्थ आयो भने सायद अभाव नहोला। नभए २÷४ दिन उत्पादनमा ग्याप हुन सक्छ।
कच्चा पदार्थ हामीसँग आजको दिनदेखि मौज्दातमा छैन। जति थियो हामीले बनाउने प्रक्रियामा लगिसकेका छांै। तर आउँदो साता हामीसँग कच्चा पदार्थ हुन्छ। डेढ टनको कच्चा पदार्थ आउन करिब आठ दिन र ६ टनको कच्चा पदार्थ आउन १५ देखि २० दिन लाग्ने भनिएको छ। एक सातामा कच्चा पदार्थ आयो भने अभाव हुँदैन।
– नेपाल औषधि लिमिटेडले हाल कुन कुन औषधिहरु उत्पादन गरिरहेको छ?
सिटामोल, जीवनजल, स्यानिटाइजर, ग्लिसिरिन र डिस्टिल वाटर उत्पादन गरिरहेको छ। थप १८ वटा औषधिहरु उत्पादन गर्ने योजनामा छौ। डब्लुएचओको जिएमजी अन्तर्गत पर्ने र सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने ७० प्रकारका औषधिहरुमध्ये पहिलो चरणमा १८ वटा औषधि उत्पादन गर्ने योजनमा हो।
हेमोडायलासिसका लागि प्रयोग हुने औषधि असार मसान्तसम्म बनाउने हाम्रो तयारी हो। मेसिनहरु खरिद गर्ने प्रक्रियामा छौँ। एजिथ्रोमाइसिन २५० र ५०० एमजी ट्याब्लेट, सिप्रोफ्लोक्सासीन, फोलिक एसिड, जिंक ट्याब्लेट, अल्बेण्डाजोल, आइरन र फोलिक एसिड लगायत १८ वटा औषधिहरु उत्पादन गर्ने योजनामा छौं। तर यसमा औषधि व्यवस्था विभागले पनि केही सहजीकरण गर्नुपर्छ। विभागले सहजीकरण गर्दा नेपाल औषधि लिमिटेडलाई आफ्नो दायित्व पुरा गर्न सजिलो हुन्छ।
– नेपाल औषधि लिमिडेटमा हाल कति जनशक्ति छन्?
म चार महिना अघि यहाँ आउँदा १०७ जना जनशक्ति थिए। तर सबै जना अवकाश प्राप्त हुने चरणमा थिए। प्रत्येक महिनामा एक÷दुई जना जागिर सकेर हट्दै गए। हाल ८० जना जनशक्ति छन्। तर यी ८० जनामध्ये पनि करिब पाँच जना बाहेक अधिकांशजसो उमेरहद या जागिरको अवधि हिसाबले उनीहरु जाने देखिन्छ। हामीले यसका लागि पनि पदपूर्ति गर्नुपर्नेछ। यसको प्रक्रियामा हामी गइसकेका छौँ।
– अहिलेको अवस्थामा यहाँहरुले सामना गर्नु परिरहेको समस्याहरु के के छन्?
सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको अहिले नेपालमा मात्र नभई अन्य विभिन्न देशमा समस्या भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै हाल पारासिटामोलको कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ। मूल्य वृद्धि हुने बित्तिकै संस्थालाई घाटामा ल्याउँछ। पहिले हामीले २८० भारुमा पाउने मोलिक्युल अहिले साढे ८ सय भन्दा माथि छ।
सरकारी कम्पनी अहिले प्रतिस्पर्धामा जान सक्ने अवस्थामा छैन। स्रोत साधन, जनशक्ति र बजेट चुनौतीका रुपमा छन्। हामीले विभिन्न योजनाहरु अघि सारेपनि सरकारबाट निर्णय गर्न ढिलाई हुँदा समस्या हुन्छ। सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने औषधिहरु हामीसँग किन्दियो भने यसका चुनौतीहरु सकिन्छ जस्तो लाग्छ।
– नेपाल औषधि लिमिटेडलाई बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा प्रस्तुत हुन के के कुराको आवश्यक छ?
एउटा बलियो योजना त चाहिन्छ। जुन हामीले बनाइपनि सकेका छांै। पब्लिक र गभरमेन्ट प्रोमोसन दुवै चाहिन्छ। सरकारी स्तरमा हामी गइसकेका छौं तर जनता माझ हामी गइसकेका छैनांै। जस्तो जीवनजल बजारमा नागरिकले माग्ने बित्तिकै हामीले दिने गरेका छौँ। अहिले हाम्रा उत्पादनहरुको प्रोमोट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
कुनै फार्मेसी पसलमा सिटामोल दिनु भन्यो भने अर्कै पारासिटामोल औषधि दिन्छन्। तर सिटामोल त हाम्रो ब्राण्ड हो नी। अहिलेको जेनेरेशनले सिटामोल भनेको पारासिटामोल भन्ने बुझेका छन् भने पहिलेको जेनेरेशनले सिटामोल भनेको नेपाल औषधि लिमिटेडको उत्पादन हो भनेर बुझ्थे।
– सरकारको स्वामित्वमा रहेको यस नेपाल औषधि लिमिटेडलाई सरकारले जति प्राथमिकता दिनुपथ्र्यो, त्यति दिएको छ जस्तो लाग्छ?
सरकारले प्राथमिकता दिने भन्दा पनि हाम्रो व्यवस्थापनले यसलाई सरकार समक्ष पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ। बंगलादेश फर्मास्युटिकल्सको क्षेत्रमा भारतभन्दा २० वर्ष अगाडी छ। त्यहाँ सरकारको एउटा कम्पनी छ, इशेन्सेयल ड्रग लिमिटेड। सरकारलाई चाहिने सबै औषधि उनीहरुले उपलब्ध गराइरहेका छन्। किनभने उनीहरुको एउटा बलियो योजना छ।
कुनै बेला नेपाल औषधि लिमिटेड उत्कृष्ट कम्पनीहरुमध्ये एक थियो। यहाँ थुप्रै मेसिनहरु छन्, जुन अपडेट नभएका कारण बाहिर निस्किदै गए। तर हामीले नयाँ मेसिन ल्याउन सकेनौं। त्यो त सरकारले ल्याएर राखिदिने हैन नी।
यहाँको व्यवस्थापनले यहाँको अवस्था सरकार समक्ष पुर्‍याउनु पर्छ। मलाई लाग्छ, यस संस्थामा पहिले सही नेतृत्वको अभावमा सरकारबीच संवादको कमी भएको हुन सक्छ। नत्र यो संस्थासँग १४६ वटा उत्पादनहरु थियो। जसमध्ये टिबीको लागि उपचार हुने औषधिहरु पनि थिए। अहिले हामी पुनः त्यही अवस्थामा फर्किनका लागि तत्कालीन तथा दीर्घकालीन योजनाहरु बनाएका छौँ।
१६ नेपाली कम्पनीको उत्पादन र ४६ विदेशी कम्पनीबाट आयात हुने पारासिटामोलको अभाव किन?